Nhau - E expo China 2020 muShanghai
E expo China 2020 muShanghai
IE expo China 2020 mu SHANGHAI
Sekuratidzira kweAsia inotungamira ezvemamiriro ekunze, IE expo China 2020 inopa inoshanda bhizinesi uye networking chikuva chevashandi veChinese nevekunze mune inoitika yezvakatipoteredza uye inoperekedzwa neyekutanga-kirasi yehunyanzvi-yesainzi musangano musangano. Iyo ndiyo yakanaka chikuva chevashandi muindasitiri yezvakatipoteredza kusimudzira bhizinesi, kuchinjana pfungwa uye network.
Pamwe pamwe nekuwedzera kwekudiwa kwemusika uye rutsigiro rukuru muindasitiri yezvakatipoteredza kubva kuhurumende yeChinese, iro bhizinesi mukana muindastiri indasitiri muChina rakakura. Pasina mubvunzo, IE expo China 2020 iri "inofanirwa" kune vatambi vezvakatipoteredza kuchinjana mazano uye kusimudzira bhizinesi ravo muAsia.
China iri kutarisa zvakanyanya kupfuura nakare kose pakuchengetedza kwezvakatipoteredza uye kwemamiriro ekunze IE expo China 2019, iyo yakaitika kubva Kubvumbi 15 kusvika 17 kuShanghai New International Expo Center (SNIEC), yakaratidza izvi zvese zvakajeka. Pakati pemazuva matatu echiitiko ichi, vashanyi vanosvika 73,097 vekutengesa vanobva munyika makumi mashanu neshanu nematunhu vakabata mafambiro uye hunyanzvi hwetekinoroji muAsia tekinoroji yekombiki. IE expo China yakaonawo kuwedzera kwevaratidziri nenzvimbo yepasi: 2,047 varatidziri vanomiririra pane yekuratidzira nzvimbo yemakumi mashanu emamirimita emamirimita (yakazara gumi nematanhatu dzimba dzekuratidzira).
IE expo China 2020 ichaitika kubva pa13 Nyamavhuvhu kuShanghai New International Expo Center (SNIEC) muShanghai, iyo ichafukidza misika yese inogona kuitika munzvimbo yezvakatipoteredza:
Mvura neTsvina Kurapa
Kusvibisa Mhepo uye Kuchenesa Mhepo